Haitrano tetsy Mangarao II
May kilan’ny afo tranon’ilay Rtoa mananotena
Niredareda ny afo tao Mangarano II, trano mitafo fanitso sy mirindrim-bolo iray no kilan’ny afo. Ramatoa iray, mitoetra irery no tompony sy mipetraka amin’ilay trano. Ny alatsinainy faha 4 janoary 2015, sahabo 11 ora atoandro teo dia nisy zavatra nipoaka tao anatin’ilay trano, afo mivoaka avy anaty trano no hita afaka segondra vitsivitsy. Araka ny loharanom-baovao voaray dia ny herinaratra (court-circuit) tao antrano no fototra nisian’ny afo ka nahamay ity trano ity.
Samy nihezaka namono afo ny mponina manodidina mba tsy hiparitahan’ny afo, ka voafehy ihany izany afaka minitra vitsivitsy. Niantso ny mpamonjy voina teto Toamasina ny mponina raha vantany vao nitranga ny loza; efa 45 minitra taty aorian’ny fahamaizana no tonga ny mpamonjy voina ka namarana ny famonoana ny afo. Isany nananosarotra ny asan’ny mpamonjy voina ihany koa ny fahateren’ lalana mandeha amin’ilay toerana niharam-boina.
Maloka ny fiatomboan’ny taona ho an’ity Rtoa ity satria harena notadiavina nandritra ny taona maro no indray kilan’ny afo. Mpivarotra anana ao amin’ny tsenan’ny Mangarano II no asa fivelomany, izao nitrangan’ny loza haitrano. Miantso an’izay malala-tanana mba hijery sy halotra fanampiana ho azy. Azo atao ny manatona ny lehiben’ny fokotany Magarano II raha hijery na hamangy sy hanolotra fanomezana.
(115) PrudHomme R. : 04-01-2016 - 17:39